Fibromyalgia နှင့်အတူသည်းခံရန်7သိကောင်းစရာများ | Fibromyalgia သက်သာစေရန်ဘယ်လို?
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါကကောင်းပါတယ် ... ဖြစ်ကောင်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူသင့်ပါတယ်။ carpal tunnel syndrome ရောဂါအတွက်တစ်ချိန်ကခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ ယခုပြproblemနာသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကြိုးစားရပါမည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ?
အကောင်းဆုံးက Lyrica (Pregabalin) or Neurontin (Gabapentin)? ၁၀၀% ရာထူးကို Ottestad Chiropractor စင်တာတွင်ကြော်ငြာ Turnus chiropractor or ...